Htc Incredible, manual y características técnicas oficiales | Androidsis
antocara | | nokuVavanyelwa, Iiselfowuni
Nangona ukukhululwa ngokusemthethweni izakuba ngomhla wamashumi amabini anesithoba kule nyanga, Sele sinencwadana yemigaqo epheleleyo ye- IHtc emangalisayo kunye nayo yonke imigaqo esemthethweni yesiphelo.
Isikrini si Uhlobo lwe-3,7 intshi ye-Amoled kunye nesisombululo seepikseli ezingama-480 × 800. Imemori yayo siyinikwa yi-576 Mb yohlobo lwe-RAM kunye ne-512 yohlobo lweROM. Ukudityaniswa okupheleleyo ngeWifi, AGPS, iBluetooth 2.1.
Ikhamera ye-8 Mpx ene-autofocus kunye nefleshi. Uqhagamshelo lwe-3,5 mm yeefowuni kunye nekhadi le-SD elincinci. Ibhetri yi-1.300 mAh emfutshane nje kancinci mhlawumbi. Ngokomvelisi onale bhetri siya kuba nemizuzu engama-313 yencoko kunye neeyure ezili-146 zokulinda.
Isivamvo esikufutshane, ukukhanya okukufutshane, ikhampasi, isantya esikhawulezileyo asisweleki kule ndawo. Umamkeli ngonomathotholo we-FM wakhelwe kwi IHtc emangalisayo njengakwi Htc umnqweno.
Como Inkqubo yokusebenza ye-Android 2.1 ene-Htc Sense interface ivuselele i-Htc kolu hlobo lwenkqubo yokusebenza.
Njengoko sibona, iphantse ikopi yekhabhoni yeNexus One.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHtc Incredible, incwadana kunye neempawu ezisemthethweni zobugcisa
@davidvv awuwuboni umohluko kwiifrikwensi? Oku kunomdla ngakumbi kwamanye amazwe apho ukuthengwa kwe-HTC kubandakanya ukusetyenziswa kuphela nge-EDGE.
Into efanayo nomnqweno we-htc nelinye ityala kubonakala ngathi bayenzile ngegorha eliguqule igama kunye netyala
Phendula ku davidvv
El incredible tiene una cámara mejor (8mpx) pero no tiene radio fm…casi prefiero el Desire…
Sí tiene radio, se me había pasado el ponerlo 🙁
Ewe, ukuba uyayigcina le nkunzi yegusha kwaye ingekho kwa i-1gb, njengoko kukhankanyiwe, ndikhetha umnqweno, okwangakwikona
Ungandinceda nge-htc engummangaliso bayivimbile kwaye andazi ukuba ndingayivula njani